Iyunithi enamakamelo okulala amabili nokubukwa okuhle kwezintaba - I-Airbnb
Iyunithi enamakamelo okulala amabili nokubukwa okuhle kwezintaba
Fox Glacier, West Coast, i-New Zealand
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Andrew
Leli kamelo elinamakamelo amabili litholakala emagcekeni avulekile endaweni yengadi enhle enokubukeka okuhle kwezintaba. Yindawo ekahle kakhulu yokuthi ujabulele ikhefu lokuphumula ngenkathi uhlola ukuthula kwe-Westland National Park kanye ne-South West World Heritage Area.
Ingxenye ye-Rainforest Motel ephethwe endaweni futhi esetshenziswayo e-Fox Glacier, iyunithi ihlonyiswe kahle ngayo yonke into oyoyidinga ukuze uhlale ujabule, okuhlanganisa i-WIFI yamahhala engenamkhawulo ne-Sky TV.
4.77 · 64 okushiwo abanye
Sisebangeni lokuhamba ngezinyawo ezimbalwa zezindawo zokudlela ezisezingeni elihle namashibhi anikezela ngokudla okumnandi, ubhiya, iwayini nekhofi, nokho uhambo olufushane kuphela oluzokuyisa ekubukeni ukwakheka kweqhwa okumangalisayo kweFox Glacier, Mt Cook kanye neMt Tasman. , ubuhle obuzolile beLake Matheson noma ugu lwasendle, olumangelengele eGillespies Beach.
Sizotholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo futhi sikusize usebenzise isikhathi sakho endaweni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Fox Glacier namaphethelo